Kooxda Manchester United oo isku diyaarinaysa inay dalab rasmi ah ka gudbiso Raphael Varane – Gool FM
(Manchester) 17 Luulyo 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay isku diyaarinayso inay dalab rasmi ah ka gudbiso daafaca Real Madrid ee Raphael Varane.
Daafacaan dhexe ayaa heshiiskiisa garoonka Bernabeu waxa uu ku eg yahay bisha June ee soo aaddan, waxaana si xoog leh loola xiriirinayaa isbuucyadii dhowaa inuu u dhaqaaqi doono kooxda 20-ka goor ku guuleysatay horyaalka Ingiriiska.
Suxufiga reer Talyaani ee Fabrizio Romano ayaa warinaya in Man United ay durbaba u soo bandhigtay ciyaaryahanka reer France qandaraas gaaraya ilaa bisha June ee sanadka 2026-ka, kooxda ayaa haatan isku diyaarineysa inay soo gudbiso dalab rasmi ah oo ay ku doonayso daafacan.
Romano ayaa sheegay in wadahadallo toos ah ay yeesheen labada dhinac afartii maalmood ee la soo dhaafay, Varane ayaa diyaar u ah inuu aqbalo qandaraaska miiska loo saaray ee kooxda Tababare Ole Gunnar Solskjaer.
Real Madrid ayaa loo maleynayaa inay ku qiimeyso 28-sano jirkaan 60 milyan oo gini, laakiin warbixin dhowaan soo baxday ayaa sheegtay in Red Devils ay ku kalsoon tahay inay ogolaan doonto heshiis 50 milyan oo gini ah.
Varane oo xulkiisa Faransiiska u ciyaarayay tartanka Euro 2020 ayaa 360 kulan u saftay Kooxda Los Blancos 10-kii xilli ciyaareed ee u dambeeyay, isagoo kula guuleystay saddex horyaal oo La Liga ah iyo afar Champions League.
Chelsea iyo Paris Saint-Germain ayaa sidoo kale soo bandhigay xiisaha ay u qabaan xiddigan, laakiin Man United ayaa u muuqata inay kursiga keydka ku heyso daafaca qibradda leh.